Ubuntu vs Windows 10: kuenzanisa kwemaviri makuru | Linux Vakapindwa muropa
Nokuburitswa kweWindows 10, iyo inoshambadzirwa se yakanakisisa microsoft operating systemVashandisi veLinux vachashamisika kuti sei Windows 10 yaizopera kana tikazvienzanisa nayo Ubuntu, iyo inonyanya kufarirwa distro muLinux nyika. Tichaedza kuisa pakati kuenzanisa uye kuongorora Ubuntu vs Windows 10 mundima dzinoverengeka dzeinonyanya kufadza.
Idzi nzvimbo dzatichazotarisa uye idzo ndidzo dzinonyanya kunetsa kana kufarira vanhu ndidzo mashandiro, kugarisana, kusangana uye kuvanzika. Sezvo kusangana kusati kwauya muUbuntu vhezheni vhezheni, isu tichaedza kuenzanisa ese masisitimu nedata ratinaro rekubatana iro Canonical inotarisira kuita, kusangana kuzere kungangotadza kusvika muUbuntu 16.04 munzira yakazara, asi muchidimbu.
2 Ubuntu vs Windows inoenderana
3 Ubuntu vs Windows kusangana
4 Kuvanzika Ubuntu vs Windows
Microsoft yaita basa rakanaka paWindows 10 mune izvi, kutaura zvazviri, Windows 8 yaipokana zvikuru mune izvi pane yazvino mashandiro esisitimu, ayo kazhinji anofanira kudya zviwanikwa zvakawanda. Aiwa kwete, Windows 10 inoda zvakajairika zvinodiwa:
RAM 1GB (32-chidimbu) / 2GB (64-chidimbu) 1GB
GPU DirectX 9 inoenderana Screen resolution rutsigiro *
Dhivha yakaoma 16GB (32-ikakuruma) / 20GB (64-ikakuruma) 10GB
Kuita iyi enzaniso Ini ndashandisa maviri ekare Acer malaptop. Pane zvandakagadza Windows 10 64-bit ine dhijitari ine simba: AMD Turion64 RM70 2Ghz dual-core ine 4GB yeDDR2 RAM, ATI Radeon HD3200 GPU uye 320GB hard drive. Ipo Ubuntu 14.10 64-bit ini ndakaiisa pane AMD Turion64 MK30 1Ghz imwechete musimboti, 2GB yeDDR RAM, 120GB yedhisiki rakaomarara uye ATI Radeon Xpress 1100 GPU. ..
Zvakanaka, kana tikasvika padanho, Windows 10 haina kunyorovera kunyangwe iri Hardware sezvakaita Ubuntu pane imwe laptop. Uye ichi hachisi chigadzirwa che linuxeros, ichokwadi chakashata, zvisinei nekuti angave ani. Kana chiri chokwadi kuti neWindows 8 yaitononoka uye yairema, kunyangwe hazvo hurongwa uhu hwakanga husina kufanana nekutadza kweVista. Asi maererano nekuita, Linux inoramba ichikunda uye zvinoita sekuseka kuseka izvi zviviri.
Ko kana ndikaita zvinopesana, gadza Windows 10 pane yechinyakare Hardware laptop uye Ubuntu pane yakasimba kwazvo? Zvakanaka Ubuntu anokunda iyo hondo nekure (uye kuti haisi iyo yakanyanya kureruka distro), asi ini ndinopokana zvakanyanya kuti Windows 10 yaive mvura, uye zvakati wandei kana ikasashanda mune imwe (kunyangwe kubvisa pachena kweiyo interface uye nekuremadza mamwe masevhisi ekutanga kuti itange nekukurumidza). Iwo mabenchmarks ayo anogona kuoneka pamambure anopawo zviri nani mhedzisiro yeUbuntu ...
Ubuntu vs Windows inoenderana
Ichokwadi icho kune mamwe madhiraivha eWindows kana zvimwe Hardware zvinogadzirwa nevagadziri kuti zvienderane neWindows. Kuti pane chikamu chemazana chinowirirana neaya masystem anoshanda anoenderana nechinzvimbo chavo maererano nemugove wemusika hazvisi zvoitika. Vagadziri vanomanikidzwa kana kufarira mamwe Hardware anoenderana neWindows sezvo ichitonga pamusika, chinotevera chinangwa iOS X inotora nzvimbo yechipiri uye Linux yechitatu ...
Asi munguva pfupi yapfuura Matambudziko ekuenderana sepakutanga akambonyangarika zvinenge zvakazara, uye zvakanyanya muchiitiko cheUbuntu, sezvo Canonical, iri imwe yeakanyanya kunaka, inoshanda padhuze nevakasiyana zvigadzirwa zvehardware kukupa iwe yakanakisa ruzivo ne auto-kuona kana nyore dhiraivha kumisikidza kuitira kuti zvese zvishande sekutarisirwa. uye zvakanaka. Muchokwadi, iyo HP Laserjet Yese-n-Imwe purinda iyo Ubuntu yakazivikanwa nekukurumidza pandakaiivharira mukati uye ikandibvumidza kuti ndiishandise nekukurumidza, Windows yakapa matambudziko uye mamwe marongedzero ehurongwa aifanirwa kuitwa zvese zvese zvisati zvashanda mushe.
Panyaya yesoftware, zvakare kune vamwe vanogadzira vanofarira chikuva cheMicrosoft yekutonga kwayo mumusika uye izvi zvinonyanya kuitika mumunda wemitambo yemavhidhiyo. Asi kana iwe uri wenguva dzose pane ino blog, iwe uchaona kuti izvi zvinoshanduka zvishoma nezvishoma. Kune mamwe zvakare mabhizimusi ekushomeka ayo Linux isipo kana ayo anofanira kunge akagadzirirwa mamwe makambani, nepo Windows yatovepo.
Izvi zvinoreva Ubuntu kana chero imwe distro isina software? Hapana nzira, kune dzimwe nzira dzakawanda pamwe nebhenefiti yekuti vazhinji vakasununguka uye hapana marezinesi ekubhadhara, kusanganisira mamwe mhinduro dzebhizinesi. Windows 10 inokunda iyi hondo, nekufarira kwakawanda kubva kune vanogadzira uye nemhando yayo yekuenderana unogona kumhanyisa zvirongwa zvevashanduri vekare veWindows. Mhinduro yeLinux inoda kukura kuitira kuti itange kupihwa kutarisisa kwayakanakira ... Kunyangwe, ichokwadi, iine mamirioni emapurojekiti uye vanogadzira vanoshanda nenzira inobhadharwa kana yekuda kuitira kuti bhalanzi ienzane zvakanyanya zuva rega rega mu kufarira kweLinux uye kwekubatsira kukuru semuenzaniso chirongwa cheWine kana iyo Steam chikuva.
Ubuntu vs Windows kusangana
Hazvina kunaka kuita uku kuenzanisa neshanduro dzazvino dzeUbuntu, sezvo nepfungwa iyi Windows 10 yaizotora mapoinzi ese, nekuti kusangana hakuna kusvika kuCanonical system uye kwasvika kuMicrosoft. Nekudaro, iyo data iri kuuya inogona kushandiswa kuona kuti ingangove ramangwana rekuenzanisa iri.
Canonical yaive nepfungwa pakutanga, asi nekuda kwekunonoka kwave kusiri iko kwave kumberi mukutanga. Microsoft, iine zvimwe zviwanikwa zvakawanda, yatanga chirongwa chayo kuti ive yakagadzirira mukati Windows 10 uye kunyangwe ichiratidzika kunge yakahwina zano re mercantile nekuva wekutanga, inogona kunge isina kukunda muhondo yehunyanzvi, nekuti Canonical ikozvino inogona kugadzirisa zvikanganiso izvo Microsoft yagadzira uye yatanga chigadzirwa chiri nani, kunyangwe gare gare. Muchokwadi haana imwe sarudzo, kana akasvika zvakashata uye akanonoka akarasika. Canonical inofanira kuita chimwe chinhu chinoshamisa.
Canonical ine zvipingamupinyi zvakafanana zvinopesana neIOS uye Android iyo Microsoft inayo, mupfungwa iyi ivo vakatofanana. Iko kutonga kukuru kweApple neIOS mutoro weUbuntu Runhare uye Windows Runhare kuwedzera uye isu tinogona kunakidzwa kuzere kusangana pamwe neizvi nhare mbozha uye edu tafura. Ini ndinotaura izvi nekuti nyaya yekubatana inogona kutora chigaro chekumashure sezvo tisina michina ine masystem aya, nekuti vazhinji vedu tinoshandisa Android kana iOS ...
Izvo zvakati, chokwadi ndechekuti Microsoft yakashanda pachirongwa chinonakidza ku gadzira maapplication eApple neIOS aenderane, pamwe neWin neWebhu maapp kugadzira chikuva chakakura chepasi rose chinoenderana navo vese mune yako sisitimu yekushandisa. Uku ndiko kubudirira kukuru, uko pamwe chete nekubatana kushanda zvakasiyana pamwe nekombuta yedesktop kana ne smartphone, zvaireva kuti Windows 10 ine mukana.
Kuvanzika Ubuntu vs Windows
Kuchengetedzeka uye kuchinjika mimwe mibairo mikuru nei Linux inotsvaira maseva uye supercomputers, pamwe nekuve sarudzo inosarudzwa yemakambani makuru, hurumende nemasangano. Hauone kukwikwidza kwakasimba neWindows Server kana OS X, nekuti mupfungwa iyi Linux haina kufananidzwa. Uye chimwe chebhenefiti yemahara uye yakavhurwa sosi software iyo inofanirwa kuwedzerwa iri Kuvanzika, iyo inogona kunetsa vanhu, asi inofanira kuvhundutsa makambani nemamwe masangano ane data rakakosha.
Kana paine maburi ekuchengetedza akagadzirwa nechinangwa nehurumende kana masangano senge NSA, zvirinani yakavhurwa software inokupa iwe mukana wekuona nekuigadzirisa, yakavharwa software haina. Zvichida iyi chimera yevamwe vanhu vese, asi nekukurumidza kana gare gare ivo vanowanzo buda pachena. Ne software yakavharwa iwe watengeswa kune mumwechete anotengesa kune iyo kambani inosimudzira iyo yatengeswa. Uye iyo data iri kunzwira chero munhu ...
Mupfungwa iyi Windows inomira pachinyorwa chakashata kwazvo, kuwedzera kune huwandu hwesoftware yakavharwa iyo inowanzo shandiswa pane aya mapuratifomu. Asi iyi noti yakaipa inogona kukundwa uye Microsoft yakazviwana nayo Windows 10, inova ndiyo system inounganidza yakawanda data kubva kumushandisi. Fungidzira nyika inogona kusevha pane yako data uye uwane yakawanda ruzivo nezve iwe, kuravira, maitiro, zviitiko, nezvimwe. Iwe unogona here kufungidzira kuti data rakadai rinogona kushandiswa mune zvematongerwo enyika kana kuti ruzivo rwebhizimusi runogona kushandiswa kuitira kuti mamwe makambani mune iyo hurumende ine kufarira anogona kuwana mukana wekukwikwidza mumusika? Zvinenge zvakaipa.
Asi kupesana neUbuntu, zvinofanirwa kutaurwa kuti haisiyo yakachengeteka distro uye kuti yakapomedzerwawo kuve ne spyware naRichard Stallman. Iyo yakanyangarika Ubuntu gore kana mamwe maapplication akabatanidzwa muUbuntu senge Amazon injini yekutsvaga (yakabviswa muUniity 8) iyo inounganidza ruzivo nezve mushandisi uye kunyange yakavharwa software inogona kushandiswa mune ino distro, haibatsire Ubuntu. Nekudaro, zvisinei neizvi, Ubuntu inorova Windows 10 nekukoromora uye kunyange yapfuura Windows iyo yanga isinganyanye kutsoropodza.
ari makambani, masangano, hurumende nevashandisi vanozove vakachengeteka neUbuntu. Ini ndaizozvisarudza ndisingazeze. Uye ini ndinodzokorora, rusununguko rweakavhurika sosi runokutendera iwe kuti uchinje chero chaunoda kana paine chimwe chinhu chekuchinja ... Senge kuti izvi zvaive zvisina kukwana, iyo yekumisikidza kurongeka kweLinux yakachengeteka zvakanyanya kupfuura chero kusarongeka kwekumisikidzwa kweWindows, chimwe chinhu chinofanira kuve nacho uchifunga nezvevashandisi vasina ruzivo rwekumisa firewall, kana IPS, UTM, fiddle ne * config mafaira ekushandura masisitimu, nezvimwe.
Proprietary madhiraivha, yakavharwa software, iyo Amazon yekutsvaga injini uye ekuchengetedza maburi ndizvo izvo Ubuntu zvinopesana nazvo. Uye zvinopesana neizvi, chii chinopesana Windows 10? Hongu izvi zvinoita kuti isisitimu yekushandisa ive nehungwaru uye iwedzere kusununguka, asi iwe unofanirwa kuyera kunyaradzwa uye njodzi dzinobatanidzwa. Zvinonyanya kusununguka kugara wakadzikama pane kuenda kunofamba zuva rega rega, asi pamwe rimwe zuva moyo wako unozoti ... Ndosaka ndichinyora ese mabasa ekuunganidza ruzivo ayo Windows 10 anayo uye unoyera njodzi:
Iwo maapplication anoshandisa ID yako yekushambadzira: shandisa ruzivo rwemushandisi ku, zvinoenderana nezvavanoda, ipa kushambadzira zvimwe zvinoenderana neprofile yako. Ucharangarira iwo masangano akakufonera parunhare kuti uite ongororo dzavakazotengesa kumakambani makuru?
Smartscreen firita: Izvi zvinotumira ruzivo nezve kero dzaunoshanyira mukati meapplication zvakatengwa kubva kuMicrosoft Store. Google zvakare haibvise izvi muChitoro chayo, chete kuti kana iri Google inozviita munharaunda uye Smartscreen inozvitumira kunetiweki.
Tumira ruzivo rwekuti unonyora sei (Ungasangane neni sei): kuvandudza magwaro ekupedzesa, dhata pamusoro pekunyora kwako inotumirwa ... Iyo inogona kunhuwa senge keylogger.
Edge inounganidza ruzivo nezve yako nzvimbo uye mutauro: kupa zvemukati zvemukati zvakaringana nemutauro wako.
Windows inopa ruzivo nezvenzvimbo yako kune ako maapp: mamwe maapplication anoshandisa nzvimbo yako kupa zvimwe zvirimo zvakaringana nenzvimbo yako yenzvimbo, asi iwe uchave uripo nekusingaperi. Icho chinhu chakadai sezvatinowana pane Android kana iOS, asi pakombuta yedesktop.
Cortana: nyora izwi rako, nzvimbo yauri, zvaunonyora, shamwari dzako, zviitiko zvako zvekarenda, tsvaga kutsvaga, chengetedza ruzivo rwedu mugore, nezvimwe. Chinhu chakafanana nezvinoitwa naSiri kana Google Zvino.
Wifi sensor: Inobvumira kubatana kune yeWiFi network pasina kukumbira password. Izvo zvinodaro kuburikidza neFacebook, Outlook kana Skype account. Zano rakanaka ku "chorice" iyo WiFi pasina kana kumbobvunza password.
Kubvumirana: Windows 10 inochengetera yakawanda yako data mugore. Ndokusaka zvichisungirwa kuve neakaundi account kuti uwiriranise. Nekudaro, iwe unogovana mapikicha, imwe data rako pachako, mapassword, marongero ekuwanika, nezvimwe.
Kugadziridza hongu kana hongu: Windows 10 haibvumidze kugona kudzima otomatiki meseji mune eImba shanduro. Ndokunge, iyo software iyo yavanoda ichaiswa iwe kana iwe uchiida kana kwete, chero bedzi iwe wakabatana.
BitTorrent-dhizaini Windows Gadziridza: hongu, sezvaunonzwa, Windows Kwidziridzo yaita tekinoroji kuitira kuti vamwe vakwanise kurodha pasi kugadzirisa uchishandisa bandwidth yako Iyi nzira yekugovana inoita kukwidziridza nekukurumidza, asi inokuvadza yako kumhanyisa mhanya.
Mhinduro uye kuongororwa: inounganidza ruzivo nezve yako yakaiswa software uye inotumira ruzivo nezve kukanganisa zviitiko, kunyange izvi zvatoitwa nemamwe masisitimu anoshanda. Asi Windows 10 inoenderera mberi uye ye "Kuongororwa uye kushandiswa kwedata" inotumirawo ruzivo nezve frequency yekushandisa kwemaapplication, ndangariro dzinotora dzinogona kusanganisira data rakakosha sezvikamu zvegwaro ratiri kushanda naro, nezvimwe. Uye chakanyanya kushata ndechekuti kunze kweiyo Enterprise vhezheni, ivo havabvumire kuimisa.
Windows Tsvaga: Iyo inounganidza ruzivo pane izvo zvauri kutsvaga kuti ikurumidze kutsvaga uye zvakare inongedzera zvirimo zvemadhiraivhi ako akaomarara uye kunyangwe zvinyorwa zvemagwaro kuti ugone kutsvaga mazwi mukati mawo. Izvi zvaive zvatopihwa mushanduro dzakadai seWindows 7 kana Windows 8.
Zvigadzirwa zvakabatana: Iyo zvakare inounganidza ruzivo pane zvishandiso zvakabatana kune network (mapiritsi, mafoni, ...).
Uye chimwe chinhu chinotipunyuka zvakanyanya ...
Ubuntu vs Windows? Izvo hazvisi nekuti isu tiri blog ye Linux, asi ndiyo sarudzo yakanakisa. Nekuda kwekuita kwayo kwakawanda, tariro yekuti kusangana kweUbuntu kunopfuura mwenje wakati Windows 10 inotisiyira isu, nekuda kwekuchengetedza uye zvikonzero zvekuita, asi pamusoro pezvose zvetsika nehunhu. Kana isu tisingafunge kuti kuvanzika ikodzero, dzima tiende.
Kana iwe uri mutambi anofarira (nekuda kwehuwandu hwemitambo uye kuiswa kweiyo Xbox chikuva kuWin 10), a Windows fanatic, iwe unofarira nezvezvinhu zvitsva zvakaverengerwa muWindows 10 senge izwi rayo mubatsiri Cortana, haugone kumirira chero kwenguva yakareba yekutendeuka uye iwe unoda kuyedza Continuum izvozvi, zvakanakantonces Windows 10 ndiyo chikuva chako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Canonical Ubuntu vs. Windows 10
Ini ndinoda chinyorwa, kunyangwe tariro yangu iri paPlasma Runhare
dambudziko ne linux nderekuti haibvise rubatsiro diki rwaive narwo kubva kuna stean uye ruoko rukuru asi hazvina kukwana ini ndinoshandisa ubuntu kutamba windows nekuti ini handikwanise kutamba gta v mu ubuntu kana chero katatu aizoita uve wakanaka kutanga kupa mukurumbira neakakura mavhidhiyo emitambo ma studio
Adrian ndinofunga akadaro
Icho chokwadi chekuti kunze kwemamirioni-emadhora ekudyara, chakakwanisa kusvika kumatanho ekuvandudza ayo akawanda ekugovera, Ubuntu, Mint, Manjaro, nezvimwe, ndinofunga kubudirira kusati kwamboitika. Usatarise kubva pane yekutengesa maonero, nekuti yemahara software haina vatengi, ine vashandisi. Uye haina chinangwa chekuwana mari, asi kusimudzira; uye mune ino poindi yekupedzisira yakawana zvakafanana kana kupfuura mubatanidzwa unoshandisa mabhiriyoni emadhora mukushambadzira, makomisheni, kickbacks, nezvimwe. etc.
Pindura Adrian ndinofunga
Sergio kumubvunzo wako kana mhinduro, iwe uchafanirwa kumirira vulkan iyo itsva opengl asi iwe uchiri kugona kutamba, kune maAAA mitambo yelinux kunyangwe ichifanira kuzivikanwa kuti kune zvakawanda zvei wi dows (asi nekutenda kune steam uye yayo steamos isu ndinovimba ese funke dpm anogona kuti isu takasununguka kuvhura windows)
Pindura kuna asdadad
Uye chii chauri kutsvaga pano?
tsvaga dhongi senge iwe
shit hapana ... linux ndiyo yakanyanya kuyedza yandakayedza maererano neOS. Kana chiri chokwadi kuti kana iwe usinganzwisise sainzi yemakomputa iwe warasika kubva kweinenge CHINHU CHINHU iwe unoda iyo terminal.
asi hei, sezvo ini ndichiona kuti hausati wakura uye une pfungwa dzevacheche, ini ndichakuudza mhinduro yaunokodzera, mafungiro ako akapusa kunzwisisa kuti akakosha sei OS iyi.
Zvakanaka, ini ndinotamba yakawanda paPC yangu uye ndinofanira kutaura kuti kwakawanda kufambira mberi kwakaitwa munzvimbo ino, kwete chete nerubatsiro rweStam, asiwo gog.com iri kushandura iro rakakura katarogu uye isu tatova nezvakawanda .sh installers. Parizvino ndinotamba paLinux Mint 17.2 KDE uye zero matambudziko. Ini zvakare ndinoshandisa POL uye mune mashoma mashoma kesi VM ine XP. Tinoramba tichikura uye ndinoziva kuti zuva richauya apo patichakanganwa zvachose iwo madiki windows …… ..
Chinhu chimwe kuenderana kuri nyore, chimwe chakasiyana chinhu ndechekuti zvese zvinoenderana, ndiwo mutsauko mukuenderana pakati pe win ne linux, ini ndinoona zvimwe zvinhu mu linux kekutanga, asi kwete ese mashandiro, mune windows Ini ndinoziva zvinhu zviri 100%, nenzira windows 10 haitore kota, linux? Zvakawanda.
Kufananidza pachako kune njodzi mukuda linux pasina nharo dzakasimba, iyo yekuraira manejimendi system semuenzaniso muma windows yagara iri nani, yakavharwa asi zvirinani semuenzaniso
linux inotora nguva shoma pane windows, windows 10 inotora nguva yakareba kupfuura ubuntu 16.04
Ricardo Gordillo Carbajal chinobata mufananidzo akadaro
Imwe neimwe ine zvayakanakira nezvayakaipira. Imwe yacho ndeyekuti GNU / Linux distros inoitirwa vashandisi vanoziva nezve mashandiro esisitimu, uye kune maWindows vatengi, vanovimba kuti zvigadzirwa zvavakatenga zvichavashandira, uye ivo havafanirwe kuisa maoko avo kwavasingafanirwe , chimwe chinhu chisingatarise kunge chiri nyore pane masystem epenguin. Nezve kuvanzika, zviri pachena kuti Linux masisitimu ane akanakisa zvibodzwa nekuti ndivo vashandisi vanopa, zvikasadaro muWindows uye zvimwe zvigadzirwa zvinovakirwa chete paUnix neLinux senge Android, Chrome OS, iOS, OSX uye nezvimwe zvisingakwanise kutaura. Ndiri kungotaura kuti iyo OS yakakwana ndiyo inogona kuwana zvakanakisa mairi, saka kunyangwe hazvo isu tichiti zvakadii kana OS imwe chete iri yakanakisa nemazhinji emavhoti, zvinosuwisa kuti iyo yaitaridzika kunge yakasununguka kune iyo mushandisi uye / kana mutengi anokunda.
Pindura Ricardo Gordillo Carbajal
Ndipe malaptop maviri awakashandisa muyedzo asi neUbuntu 14.04 LTS .. windows hapana kana chinoda 7-core icore 8 kuti imhanye nekukurumidza .. haha ​​..
Pindura kuna hyoga01
Ini ndinoda linux, kunyanya ubuntu; asi ini ndaigara ndine matambudziko nelaptop yangu; kunopisa zvakanyanya uye ndinofanira kuti mashandiro ayo palaptop yangu akajairwa, ini handifarire mafambiro ayo… handitombotaure nezve mafomu, ini handizvifarire.
Ini ndinogara ndichidzokera kumahwindo, ikozvino ndine yekutanga windows 10 uye yangu laptop inoshanda zvirinani ichienzaniswa ne ubuntu.
Izvo hazvireve kuti zvakashata ... Ose windows / linux / osx akanaka nembug uye zvidiki ruzivo.
Pasina shungu dzekurwisa kana kusarura ini ndinogara nemahwindo uye linux yechipiri sarudzo.
Hatina chokwadi nezve Linux zvakavanzika chero… .. isu hatinyatso kuziva zvakawanda nezve programmers kana vaane hukama navo. Iwe unoona kuti isu tese tinoita senge vakanaka kana vashoma vanoita seasina kunaka, zvisinei iwe unoda kuzviona ...
Iwo mafeni ane Ubuntu Gnome akaitika kwandiri, ini ndakatevera gwara rekumisikidza otomatiki tembiricha zvinodzora uye ndinazvo panguva imwechete yekupisa seW10 asi nekuita zvirinani :) Kana uchine matambudziko, tsvaga
Hondo yeTitans "? Inoita kunge chinyorwa cheRT chiri kutaura nezveUSA. Zvishoma iwe zvaungaite kuritumidza "David vs. Goriati."
Ini ndine ese maOS akaiswa uye zvakasikwa hazviputi ...
Pindura kuna asdasdffasdas
Ndine windows 8.1 pane imwe laptop uye Ubuntu 14.04 pane imwe.
Ndinofanira kutaura kuti ndinoshandisa mawindo zvakanyanya nekuti Flash ichiripo muzvirongwa zvakawanda zvakaita seRotari yangu uye account yeBetting iyo yandinogona kubata nemazvo.
Hazvina kudaro muUbuntu, izvo zvinondisiya ndisina kugadziriswa maburi, sekuwana mukana wekutangazve mari muaccount kana kugona kutamba mabheti angu.
Kunze kwekudzokera shure uku. Ndingadai ndisina hanya kushandisa imwe sisitimu kana imwe.
Ndine shamwari yangu inotandara muswere wese wezuva ichiti izvo Windows 10 ndiyo OS yakanakisa pasirese. Handifanire kutaura kuti pakati pake neni, iye anonzwisisa makomputa ndini. Ini ndinonzwisisa kuti Windows iri nyore kumushandisi nekuda kwetsika. Ini ndinofungidzira kuti sezvo vanga vachiba data sezvo Windows iri Windows (kwete kuverenga hutachiona) zviri nyore kwavari kuti vasaite chero chinhu, kunze kwetsika zvakare. Iko shanduko kubva kuWindows 7 kuenda kuDebian kana Mint yakandibhadharira kutyisa kukuru, uye handireve kushandisa iyo internet. Ndiri kutaura nezvekuziva iyo system uye kuziva maitiro ekuita chero chinhu nayo. Sezvo ndadzidza Linux, pandinotora Windows komputa zvinoita sekutambisa nguva. Uye kana malware ane huni akandirova, ini ndoda kupaza komputa yangu.
Linux iri nani sisitimu yekushandisa, zvinongoramba zviripo kuti vana vanakomana vezvigunwe vanozvigamuchira uye zvinhu zvinonyanya kuifarira.
Mushandisi asina zano, ane kushayikwa kwakafanana kwepfungwa muWindows senge muLinux, asi iwe uchashandisa mari shoma kumuita kuti achenese tsvina inouya mukutarisa zvinonyadzisira ...
Huwandu hwe MEGA HARMFUL software installers iyo inonatsa nzvimbo dzaunotora download shit (windows software = software + yakasungirwa shit) yakawanda zvekuti kunyange ini ndakabata dzihwa ini. Izvi, mune zvakajairika gamuchira, gamuchira, gamuchira mushandisi mamiriro anoshandura pc yako kuita shit mumaminetsi maviri.
Ini handipe shit nezve Windows kudya mavhairasi maviri mumaminitsi gumi. Izvo zvinonyanya kukosha kwandiri inguva yakatambisa kuisa Windows. Kupedza maawa uchiisiya zvakanaka kuitira kuti moron ine shit yake ye malware app indiparadze pasina kana mukana mudiki.
Sarudzo yehungwaru, Debian, Ubuntu, Mint (debian / ubuntu).
Kana dambudziko rako iri mitambo, zvitengere iwe koni uye mira segehena.
Iwe murume, wakatsoropodza kushoropodza kwako kunyanya "kusagadzikana" kweWindows kumavhairasi, kungokuudza kuti mumakore mapfumbamwe andanga ndiine Windows handina kana hutachiona kana Trojan, inyaya yekuve ne yakanaka antivirus uye inodzivirira mapeji isingavimbike, uye hazvisi izvo kuti haisi pirate kwazvo, kuti ini ndine teras yezvinhu zvepirati uye hapana chakaitika kwandiri, sekutaura kwangu inyaya yekuenda kumapeji anovimbika, zvakare kunyange chrome pachayo dzimwe nguva inokuyambira kana iwe ukapinda mapeji asina hunhu.
Ndine iyo 360 TotalSecurity antivirus uye inotondinyevera nezve chero shanduko murejista idzo zvinoshandiswa nemaapplication (tanga pakutanga semuenzaniso)
Kunze kwekunge iwe uri mutambi anofarira seni, ingangoita mitambo yese iri paPC, uye mimwe chete iri paLinux.
Kwandiri, dambudziko neLinux nderezvishoma zvarinazvo, kana izvo zvachinja ndichafunga nezvazvo sezvo iri sisitimu yakasimba uye yakachengeteka.
Iyo Windows 10 chinhu chave chinoseka, kuvanzika kwakatakurwa uye ini pachangu ndinogadzikana neWindows 7 asi sezvo ivo vasingagadzirise izvo, nekukurumidza kana chapera kushanda ndiri kuenda kuLinux ndakatarisa pasi.
Ubuntu kana chero GNU / Linux ichagara ichikurumidza kupfuura Windows, chero anochida uye chero asingachide, chinonditsvedza, asi ichokwadi
Kunoshamisa kuenzanisa. Inofanira kunge iri muchinzvimbo chekutanga chakaipisisa mugore rapfuura; hazvisi nyore kuita zvakaipa kudaro.
Kuzvishandisa-wega kwema fanboys.
Ini ndinoshandisa GNU / Linux kubvira Red Hat 5.0 mune yega uye yehunyanzvi ndima, uye zvakare Windows. Windows haina chekuitira GNU / Linux, kunyangwe paine vanhu vazhinji vasingatozive mashandisiro ayo.
Ini ndinobvumirana zvachose, fananidzo inokodzera mukomana ane makore gumi nemaviri, kuita bonhora kune fanboys, avo vanoziva chete kushevedzera "yangu iri nani nekuti ndinoishandisa." Uye chenjera, ini handisi wega Microsoft mushandisi, ini ndinoshandisa linuxmint, ubuntu, kudzika uye windows 12
yakanakisa kuenzanisa nechokwadi chakakura ini ndatoedza windows 10 pro uye yakanyatsonaka nezvakawanda zvitsva uye zvitsva zvinhu, asi maawa makumi maviri nemasere ndakange ndave zvekare neangu andinofarira OS ubuntu 24 lts uye bhuku rangu rekunyorera kunyangwe ndiri musimboti i 14.04 intel uye inoenda nekukurumidza nemahwindo, ine ubuntu ine mapapiro HAKUNA CHINHU CHAKANAKA SEBHUNTU
Kusununguka zvishoma kuenzanisa muchikamu chehunyanzvi. Kana iwe uchida kuve nechinangwa, shandisa zvishandiso zvinokutendera iwe kuyera zvinhu nenhamba. Kuita hakusi kungofunga nezvemaonero (ini ndinoenda nekukurumidza kupfuura iwe, kana yangu iri hombe… ndeyevana vechikoro). Chavo ndechekuti iwe unoshandisa bhenji rekushandisa mune ese masystem (imwe iri multiplatform) uyezve tobva takurukura kuti zvinhu zvinofamba sei mushe. Ichokwadi kuti magiraidhi anoyerwa ipapo uye isu tinovimba nemashandisirwo emugadziri mumwe nemumwe pane madhiraivha, asi kune zvekare bvunzo dzekuita dzecpu, gondohwe, nezvimwe.
Mhoro. Dambudziko chairo mashanga. Iwo chatporno zvirongwa hazvishande pane linux (kana kushandisa waini). Saka iwe uchandiudza maitiro andinogona kuzviita ndichiona wekuBrazil pawebhu webcam.
Bvumiranai kuti kune kugoverwa kweLinux kunoitirwa kuvanzika asi ndinofanira kutaura kuti zvachose sarudzo dzese dzinoratidzwa mukuvanzika dzinogona kumiswa mukati Windows 10 uye zvakanaka muchikamu chekuenzanisira haisi chete iyo inogona kumiswa, ndeyekuti ini handi ziva kwavakaburitsa kuti account yemuno haigone kushandiswa, kunyangwe ichokwadi kuti kana iwe ukatora iyo yekumhanyisa kumisikidza, zvinenge zvese zvinoitwa saka kana tikataura nezvesarudzo dzesarudzo vanogona kupokana kunyangwe chiri chokwadi zvakare kuti ndinoda mubatsiri saCortana, Siri, Iyezvino nevamwe nekuti zvinosuwisa kana uchifanira kupa nekuti dai zvisiri vaisazoshanda nemazvo ini ndine zvese zvakagadziriswa zvakanaka uye handishandisi Cortana ini chete ndakazvishandira pahwendefa reWindows randinazvo kunze uko uye palaptop asi ndeipi komputa yangu huru nekuti ini ndakaigadzira sezvazvinofanira kuva ini ndinongova neakaundi yeMicrosoft uye muchikamu chekuenzanisira ndinongotendera iyo kuchengetedza zvandinoda E neEdge uyezve zvakanaka kana nechimwe chikonzero ini ndaisavimba kuti kana ndikabvisa zvese zvakanaka zvadzimwa kunyangwe kuongororwa kwekutaura hakuna chinhu chekuisa muzvakakosha nekuti kero dzinotumirwa neMicrosoft data dzayo dzinogona zvakare kuvharwa, chinhu chekupedzisira chandakaita usingaite asi ini ndinayo ipapo kuitira kuti zviitike
Pane yangu laptop ndinoshandisa Gentoo. pane desktop yangu Elementary Os, uye pandinoda kutamba ndinoenda kumuchina wehama yangu uyo ​​ane PC inokwenenzvera nezvose zvazvino. asi handifunge kuti zvaizoshanduka kuita Windows, zvirinani kuti ndishandise Mac os ..
Pindura kune linux@hotmail.com
Ndine Ubuntu 14 pane yangu laptop laptop uye chokwadi ndechekuti iguru, ini ndinongoshandisa Windows muVirtualBox yeAutoCAd, Photoshop nezvimwe zvishoma. Pangosvika bricscad kana Drawifgth / krita-gimp-inkscape-yakasviba inotora, handifunge kuti ndichamhanya windows. Kune rimwe divi, ini ndine Linux Mint pane iyo laptop uye yakanyatsogadzikana uye yakapusa. Lubuntu tinayo pakombuta yekare yevana; inoshandisa mashoma zviwanikwa uye inogadziriswa kwazvo. Uye nezveramangwana iwe unofanirwa kuedza kushandisa Opensuse
kuenzanisa kwakashata kwazvo, kusarura zvachose. Iwe haufunge nezve simba rekushandisa, mashandiro emabhatiri, kupisa zvakanyanya, kutadza mune izvo zvese zvinetswa muUbuntu, izvo zvinodzivirira hurongwa mu laptop.
Windows iri nani pane Mac Os yekuenderana ...
Ini handisi nyanzvi muOS, ndoda programmer, asi chokwadi chinofanira kutaurwa, W 10 iri kukwezva vashandisi neCORTANA uye kubatana kwekubatana neMidziyo nhare. Ubuntu inofanira kushanda munzvimbo iyoyo. Zvinhu zvisingaverengeke zvinogona kuitwa nemunhu akanaka wezwi mubatsiri uye kunyanya kune avo vedu Vasingazive nezve makomputa. Zvingave zvakanaka kuve neyakajeka, izwi rechisikigo, uye wizard isina kunetswa kuiisa. Zvinogona kuwedzera mashandiro emushandisi uye ruzivo rwezvimwe zvekuti pakupedzisira ndizvo zvatinopusa mukushandisa komputa. Ubuntu ine kernel yayo nekukurumidza, iwe unofanirwa kutora mukana weiyi sarudzo.
Ivo vanofanirwa zvakare kufunga nezvekutora kuraira kwepamutemo, kuti pfungwa dzinomuka kubva munharaunda iyi yeLinux dzirege kuwira mumaoko aMicrosoft W. Huye, hazvitore hunyanzvi kuziva kuti mamwe ehunhu hweLinux, Ubuntu, nezvimwe. . akave akaiswa muWindows. Ndiwo chete maonero angu. uye zvakadaro ini ndinopfuurira neUbuntu 14.04 lts zvakanaka, asi zviri ZVINOKOSHA uye ZVINODIWA kuita kudyidzana pakati pemushandisi nePC sekutaurwa kwazvakaitwa kare. * - *
Omar Navas akadaro
Linux inonzwika seinonakidza asi inoshaya zvakawanda kuti ive nemamiriro uye kureruka kwemawindo…. zvinoita sekunge zvakanangana nechikamu chidiki chevanhu vanofarira makomputa. Maitiro andinozviona ini, Linux ndeyevashandi.
Pindura kune omar navas
Jooooder! Ini ndaiziva kuti Cortana uye Windows 10 yaive yekurwisa kuvanzika ... Asi zvidzitiro ... Wakandityisa !!!!!
Pindura kuna chaunaveganteJaime
Uye kana iwe ukaverenga mvumo nemagwaro etsamba, iwe unogona kuona kuti unovapa mvumo yekuchengetedza nekubatidza, pasina chaunosarudza chero chinhu, maikorofoni uye webhu-cam.
ndinobuda kubva kubuntu akadaro
Ini ndichangotenga komputa yemunhu uye ndave kuda kuzvipfura. Ini ndinoenda ndichitarisa maforamu uye maforamu uye zvinotora maawa kumisikidza komputa: haiende java, haina kuenda kupenya, uye kumisikidzwa iroto rakaenzana nekuenzaniswa nemac kana windows. Muchikamu chehardware, zvese zvinhu zvakakwana, hapana zvichemo, uye zvave nani zvakanyanya zvichienzaniswa nenguva yekupedzisira pandakaiona.
Icho chokwadi ndechekuti ini handigone kuita chero chero chinhu chandinofanira kuita nekuti iyo Java haishande, humbowo hwekuita manejimendi maitiro, nezvimwe. Uye iyo nguva inouya kana iwe ukazvibvunza pachako kana zvakakodzera, zvisinei nekuti wakanaka sei Ubuntu, kuisa maawa enguva yako kuti uite benzi maitiro online. Mhinduro ndeyekuti, saka, kunyangwe ini, ndiri kuenda ndichatenga windows rezinesi kugadzirisa dambudziko. Chokwadi ndinogona kupedza mazuva ndichidzidza OS uye ndichiverenga zvisingaperi maforamu maforamu, asi ndezvebasa uye handina nguva yekuzviita.
Pindura kwandiri ndiri kubvisa kubva kuBuntu
Kunyanya, iwe une Flash plugin mumusika weUbuntu, tinya kuisa uye ndizvozvo. Java uri kutaura chokwadi, asi Windows inobudawo isina Java. Unogona kuisa OpenJDK kana Oracle Java (ini ndinoshandisa Oracle), uye zviri nyore kuisa, kunyangwe vachifanirwa kuiisa munzvimbo dzepamutemo, kunyangwe ndichifunga kuti kune makakatanwa nemarezinesi (LGPL, GPL, MPL, proprietary, nezvimwe. ).
Mhoroi vanhu vese! Ndine bhuku reBGH QL 314 rinozvininipisa, rakauya nemawindows 8.1 uye rakagadziridzwa kusvika gumi. Ini ndinofunga hazvidiwe kujekesa kuti zvinononoka sei ... ndakashandisa Ubuntu pc, ndinochida, uye ndaitofanira dzokera kumahwindo nekuti ini ndaishandisa iyo Siap. Ndinoda kuisa ubuntu pabhuku rekunyorera, asi kutya kwangu kuri kuimonera nekuti ndiri kuenda kuumbiridza iyo yekutanga windows. Pfungwa ipi?
Zvinoenderana, kana iri OEM Windows 8.1 (i.e. mutengesi akagadziridzwa kopi) iwe unofanirwa kuve nechaiko kupora kana kudzoreredza diski. Kana iwe uine reinstallation disk ita zvaunoda, kana iwe uine yekumisikidza partition iri dambudziko, nekuti kana iwe ukabvisa Windows kunyangwe iwe ukasiya iyo yekuzorora partition pane hard drive, haugone kuimhanya nekuti iyi sarudzo iyo iwe ita kubva paWindows, uye iwe waizorasikirwa newarandi. Zvese zviri kutora njodzi, zvinoenderana nezvaunoda.
Kana ikakubatsira iwe. Kwaziso kubva kuSpain!
Ini ndinofunga kuti hapana ari nani kupfuura mumwe. Ini ndinoshandisa windows 10 uye ubuntu 15. Kuve wekutanga kuiswa pane yangu hard drive uye iyo ubuntu pane pendrive. Uye ini ndinoshandisa zvakare iyo Mac OS 9 yakateedzera xD
Muchokwadi, kana software iri muWindows, kana iyo Hardware yanga isingafambidzane sezvataurwa. Unogona kutenga purinda uye inouya neyekuisa disc uye inoenderana neWindows. Hongu, asi pane dzakawanda zviitiko zveimwe vhezheni yeWindows kana Windows xp kana Windows 7. Kana iwe ukaisa software, zvinowanzoda software yekunze.
Izvi zvakafanana nemitambo. Izvo zvinodikanwa kuti uve nehumwe hwesoftware kuti ugone kutamba iwo zvimwe nekuti iwe uchafambisira mberi hupenyu hwepc yako. Iwe hausi kuisa Windows uye haina kuisa ese madhiraivha. Dzimwe nguva Windows 10 kazhinji inoisa madhiraivhu asiri iwo mune zvinyorwa. Mune Laptop haugone kumisikidza Windows bofu iwe unofanirwa kunge uine madhiraivhi aripo kwavari vanovimba neicho chaiyo kutonhora system. Zvikasadaro zvinokupisa.
Izvo iwe zvaunofanirwa kuziva nezve Linux ndeyekuti ine zviyero. Akagara achitarisana nedambudziko. Zvizhinji zvezvinhu zviri muWindows kana Mac hazviwanikwe kune Linux, asi panogara paine imwe nzira. Mune maonero angu kusvika nhasi hapana vhezheni yeWindows inopfuura kudzikama uye nekumhanyisa iyo linux isina kukanganisa Microsoft. Kunyangwe kana vavaki vayo vasingazvibvume uye kunyangwe paine matambudziko nekukanganisa kwayo.
Kusvika ikozvino handikwanise kutumidza zvakaipa zveWindows 10. Nekuti Microsoft inoshanda paWindows 10 munzira dzisinga nzwisisike. Ndokureva kuti kunyangwe kana izvi pakutanga zvinogona kumhanya zvishoma kana iwe unogona kuve nematambudziko. Microsoft ichagadzirisa zvishoma nezvishoma. Saka zvinoenderana nezvaunozvipira iwe ndizvo zvauchatora. Kana iwe uchizogadzika Windows 10 uye iwe une laptop, hazvikurudzirwi kuisa yakachena chete iyo yekuvandudza uye kana iwe ukagadzirisa uncheck bhokisi kurodha pasi zvinyorwa usati wagadzirisa. Kune rimwe divi, 2 GB mu RAM inokurudzirwa pakati pevamwe. Kana iwe uine pirated software, mumhanzi, mavhidhiyo pakombuta yako hazvikurudzirwe.
Kune rimwe divi kana iwe uchiziva zvaunoda uye uchida kubvuma iro dambudziko. Ndokunge, kana iwe ukawana izvo zvaunoda mu linux saka Gnu / Linux ndiyo sarudzo yako. Rangarira kuti kuseri kweGnu / Linux kune vanogadzira uye vanogadzira uye kunyangwe iri yemahara software ivo vanorarama pane zvipo zvaunopa.
Linux inopa akawanda matambudziko. Kunyangwe Ubuntu 16 iwe unofanirwa kuve uine nguva yekumisikidza uye usatombotaura nezve iyo inosemesa kubatana bar iyo isingatenderi iwe kuti uibvise asi uri kutsvaga zviuru zvevadzidzisi painternet. Kunze kwematyairi madhiraivha ndaigona kunyora. Ini ndinofunga kuti kune mushandisi akajairika uyo anoda kuti OS imhanye chete zvirongwa zvaanoda, haakwanise kuisa linux asi iye achapedza maawa achitsvaga nzira yekumisikidza uye achikumbira kuti haina kukonzera dambudziko uye kukuita kuti unyore zvakanyanya yemirairo pakoni imwe neimwe. Ichokwadi. Kunyangwe vazhinji mafeni vachitaura neimwe nzira mukudzidzira kushandisa Linux zvinonetsa. Kwaziso.
Ini ndichakupa iyo chikonzero neUniity sidebar, zvirinani izvozvi (ehe, nemirairo) inogona kuiswa pasi. Iyo desktop yauri kutsvaga Ubuntu ine imwe desktop uye ndizvozvo (ini ndinokurudzira Gnome, inoshanda kwazvo uye inokurumidza).
Ichokwadi kuti zvisati zvave zvakanyanya kunetsa, asi >>>> mune yangu nyaya <<<< Ini handina kumbobvira ndawana Hardware kana software matambudziko (ini ndinoshandisa zvirongwa zvekuvandudza, ndezvese masisitimu, ndaive nerombo rakanaka). Nezve vatyairi ini ndagara ndichivatora ndega, saka handipinde imomo.
Zvinoenderana nezvirongwa zvinoshandiswa, ichokwadi kuti ndezveWindows chete. Asi, ndinodzokorora, mune yangu nyaya, ndakatsvaga mamwe maitiro anoshanda. Zviripachena kana iwe uchizopa mari yemitero, yaisave yeLinux. Uye vanhu vanonyatsoda Microsoft Excel mushe, ungave uchii teedzera neWine (zvinonetsa) kana iwe unoshandisa Windows (sezvandaifanira kuita, ndakateedzera iyo kuronga muVisual Basic).
Ini ndinonzwisisa maonero ako, nekuti ndisati ndaziva nyika yeLinux ndakazviona zvese zvichikwira, asi usanyanye kutaura kana uchiti Linux inonetsa. Mune yangu nyaya, zvinonditorera maawa maviri kugadzirira chete iyo Windows system kuti ndikwanise kuishandisa, Linux inongonditorera maminetsi makumi mana ikozvino.
Izvo chete, rukudzo.
Dambudziko rega randinoona neUbuntu (kana richigona kunzi dambudziko) nderekuti kana usiri musayendisiti wezvemakomputa ane ruzivo zvinotora basa rakawanda kuti uchinjane neiyi OS nekuti pane zvese zvaungade iyo terminal ... kana zvirongwa zvekumisikidza zvave Zvakawanda pachinzvimbo chekufanirwa kuisa kodhi kuburikidza neiyo terminal, vanopfuura mumwe mushandisi vangazvikoshesa (Ini ndinozvibatanidza).
Waini haigone kutsiva windows nekure ... ndine urombo kutaura kuti neWine ndangove nezviitiko zvakashata, kana iwe uchida kutamba mutambo unopenga mudutu remhepo (ndiri kutaura nezvazvo mitambo yekare, nekuti yazvino uno hautombonhuwi) uye kana iwe uchida kuisa chirongwa hapana mukana wekuti ichave yakakwana, ndakapenga ndichiisa loquendo uye Microsoft izwi uyezve mhedzisiro yacho yakasiya zvakawanda zvekushuvira sezvo akandipa madudu akawanda zvekuti ndakasiya ... izvozvi ndinoshandisa mahara software senge gespeaker kana libreoffice uye nokutendeseka, iri imwe nzira inoshanda.
windows kurwisa kukuru kune kwedu zvakavanzika, ndosaka ndakasiya windows 10 padivi ndikaenda kuubuntu, ini ndanga ndatorwara nekusaita basa kwepuratifomu nemahwindo nematambudziko ayo anogara aripo.
Joed glezmor akadaro
Iko kuenzanisa ndiko kutaura kwandingati "zvimwe zvakafanana", hapana chinonyatsoenzaniswa icho chatisingazive kare; Ini ndinoshandisa GNULinux: #! (Ini ndatochinja zita rangu), Elementary uye Ubuntu pamakomputa angu, ndakafunga kuti uku kuenzanisa kwaizondipa zano rekuti ndovimba here kutenga komputa ine windows 10 kuyedza, asi kwete. Iyi fan fan yekuita chero fanboy inotaura zvakajairwa, uye seyambiro yekutaura kuti "chinhu chakadai hachina kunaka ... nekuti windows ine mukana" mu -kuenzanisa- haina nzvimbo, nekuti, kana iri kuenzanisa kwakanangana kana Kunonakidza here? Uku hakusi kuenzanisa kwechokwadi.
Pindura kuna Joed Glezmor
Ini ndinonyatsoda linux ... asi ini ndiri mugadziri uye akapfava ndiwo chete chinhu chinondichengeta nema windows ... dai paive nekukwana kuzere, ini ndaisazo kupokana nazvo ... hazvo, ndazama akawanda makuru madhiri ... zvese mukugadzirwa uye kuita ...
Kana iwe uchinyatsoda kukwenya mumwe munhu pamusoro, kurudzira Ubuntu kwavari. Icho chikamu chepamusoro chekutsikirira chiripo.
Ini pachangu, ndinofunga Microsoft yakabudirira neWindows 10, zviri nyore kushandisa seWindows 7, asi nekukurumidza uye nekubudirira, kana ichienzaniswa naUbunto wandaisakwanisa kutaura.
Iko kuenzanisa kwakanaka kwazvo, ini ndine laptop ine zvakafanana maitiro (chaizvo 4 GB ye RAM uye iyo ATI radeon HD3200 kadhi revhidhiyo), uye kunyangwe zviome sei ndichiedza kuita Windows 10 PRO (vhezheni TH1, TH2 uye RS1) shanda zvakadaro handaikwanisa kuti ishande nemazvo sezvo isinga dzime (iyo skrini inoramba yakasviba neprosesa inotonhorera ichishanda), saka ndinoda kuziva kuti wakaita sei kuti W10 ikushandire zvakanaka
Joshua Gomez akadaro
Ndanga ndiri mushandisi we linux kubvira 2007, ndiko kuti, makore gumi uye mumakore ano, zvakanyanya sekuda kwandanga ndaita linux yangu chaiyo yekushandisa system, iri kure asi iri kure neWindows. Ini ndiri mainjiniya ehurongwa uye kungoisa iyo Java JDK neEclipse kwaita pc yangu kupunzika neakasiyana ekugoverwa kweUbuntu, fedora (ichi ndicho chandinofarira), Vhura suse, nezvimwewo kune arch linux, painenge isina kumborembera pamahwindo. Zvinowirirana nezvinetso nazvo, kutsamira kunotyora kutsamira uko pavanogadzirisa vanotyora kumwe kutsamira uye hazvisi zvekuti ini ndaisa mamwe mapurogiramu, kungoisa iyo OS uyezve kana ichindibvunza kuti ndigadzirise musoro unotanga.
Huyai, ngative takakomba uye tichienderana nezvatiri kugara, dai linux yaive yakanaka uye yakachengeteka, makambani makuru aizoishandisa, asi kwete ese anoshandisa windows, enda kubhangi uye NOBODY ine linux.
Pindura Josue Gomez
Mhoroi, ini ndiri wefizikisi uye ndanga ndiri mushandisi weLinux uye fan kweanopfuura makore gumi. Kudzidza doctorate yangu kwakandiunza padhuze nekuita manhamba ekufananidza nemasumbu ane Linux OS. Asi komputa yandinayo muhofisi ine windows 10 uye iri kunyanya nekuti graphic ficha iri nani pane ne linux ..., asi kana uchifanira kuita zvekufananidza kana kuumbiridza macode emasumbu, hapana imwe nzira, linux iri sarudzo yakanakisa.
Juan Alonso akadaro
chokwadi ndechekuti ini handizive kuti ndeapi mashandiro eLinux anotarisirwa. poindi ndeyekuti, iwe unoda kubatana nehunyanzvi odhiyo interface, Linux haitore. Zvamunotaura nezve printer zvakandiwira neimwe nzira yakatenderedza. Windows inotora iyo nekukasira, Linux haitore kadhi rekuteerera, dzimwe nguva rinondipa zvikanganiso muinternet kubatana. Ini handikwanise kuisa cubase, sibelius, samplers, nezvimwe. nokutendeseka kana Windows ichinonoka zvishoma, ndinonamira nayo. saka ini ndoda system inoshanda nekukurumidza uye isingakwanise kuishandisa iyo yandinoda.
Pindura kuna juan alonso
Shandisa ARtistX kana Ubuntu Studio;)
Linux kana Windows? kwandiri zvechokwadi LINUX, pandakaiwana makore mashoma apfuura ini ndaigona kunyatsonakidzwa nekushanda pc yangu uye ndisingazvinetse pese masekondi mashanu sezvandaiita nema windows. Ichokwadi kuti pachinzvimbo chekupa clip dzimwe nguva tinofanirwa kupa zvikamu zviviri asi RUSununguko RUNOKOSHA !!!!!!
Kutendeseka, ndanga ndiine linux kwemakore andanga ndichishandisa iyi sisitimu yekushandisa pandiri. Ini ndaida kutenga yangu yekutanga pc ndaida winfows 7 kune fuses uye chokwadi ndechekuti rezinesi rinokuuraya iwe uye zvakare rine zvimwe zvikanganiso mu linux kune zvimwe zvakavanzika uye haufanire kunetseka nezve mavhairasi damn it! Mumhepo mhepo zvese zvinobuda mari kana rezinesi mukuwedzera kuchokwadi chekuti mimwe mitambo kana kunyorera zvine hutachiona
Kunyange kuyerera akadaro
Chinhu chikuru chakakanganisika icho Linux yakafananidzwa neWindows ndechekuti inoda curve yekudzidza yakakwira, iyo vashandisi vazhinji vasingadi kutsungirira. Nekudaro, neMint uye Ubuntu, iine hushamwari matafura uye mifananidzo inokwezva, veruzhinji vasina ruzivo rwakakura rwemakomputa zvinoita sekunge haina kuomarara. Nekudaro, izvo zvichiri kudhura kune vanhu vazhinji vanoda kuzviwana zvese zvakatsengwa. Chimwe chinhu chinoshamisa sekuva nezvakawanda zvisingaverengeke zvinogona kuchinjiswa zvakakwana kune chero mushandisi, zvinopesana neLinux, nekuti avo vasingazive kuti izvi ndezvei, kana vachifanira kupenga "kungosarudza, vanopedzisira vasarudza izvo nyore, zvinova ndizvo zvaunoziva (Windows).
Kune mamwe ese ekufananidza, hapana ruvara, Linux kure inopfuura Windows. Parizvino, ndine matatu malaptop ese ane akasiyana Linux migove yakasarudzwa zvichienderana nekugona kwemichina. (Kana paine chinhu chimwe chete Linux chinoita zvinoshamisa, iri "kumutsidzira" makomputa ekare kana asina zvigadzirwa.
Pindura Kunyangwe Kuyerera
Tsananguro isipo, kugadzikana, mune iyo Linux inokunda, kunyangwe Windows iri kuita zvirinani uye zvirinani.
Uye zvechokwadi iyo software yakakosha, mune iyo Windows inokunda nekukoromora, hwakawanda hwesoftware yemhando yepamusoro yakagadzirirwa Windows uye dzimwe nguva kuMac.
Ana gonzalez akadaro
Ini handizive kana yatove yakataurwa nekuti pane zvakawanda zvataurwa. Munguva pfupi ini ndichatanga Specialised Master uko kwandichazopihwa Graphic / Web Dhizaini, 3D, Chirongwa, nezvimwe. Asi ini ndinodawo kuzvipira kuita vhidhiyo yekugadzirisa, saka ndichanyatsoshandisa Adobe, uye pamwe ndichigadzira mitambo yemitambo. Iwe unokurudzira Linux kana zvirinani kushandisa Windows?
Pindura Ana González
Edgar steffen akadaro
Ini ndinoshandisa Windows nekuti yakawanda software inouya yeWindows neIOS, asi kwete yeUbuntu. Semuenzaniso, Corel Dhirowa, AutoCad, PhotoShop, nezvimwe. Kuva neUbuntu ndekwe kungotsvaga. Ini handizive iwo musoro wekuishandisa sewebhu dura.
Pindura Edgar Steffen
Rolando Enriquez Ayuque akadaro
Ubuntu ndinoishandisa kuYunivhesiti masisitimu kwandinoshanda, ndakachengeteka zvakanyanya, ndakavimbika, handina kana matambudziko kusvika nhasi, ndiine mavhairusi nevanopinda .. Changa chisiri kuitika neWindows, ndaive nematambudziko mazhinji uye ndaifanira kutamira kune akanakisa Ubuntu system mune yayo yekupedzisira vhezheni ... Seizvo munhu wese anoti zvakakosha uye zvakachengeteka tinoshandisa Ubuntu, yemawindows mitambo jajjaaja ... Icho chokwadi chakachena ... ini ndinoshandisa ubuntu pane maseva eYunivhesiti uye pawebhu dura rangu. , inokurumidza uye inoshandisa zvishoma zviwanikwa, zvakanaka kwazvo ndinoikurudzira uye 0% mutengo ...
Pindura Rolando Enriquez Ayuque
Yangu ruzivo rwevashandisi nedata rekongiri. Komputa isina simba kwazvo mune yechipiri imba inongotendeuka pamwedzi miviri/2 uye ine bhutsu mbiri ine Windows neLinux.
Uine Linux unovhura, maitiro ekuvandudza anotanga uye mumaminetsi makumi maviri nemakumi maviri nemashanu uye pasina kutanga kwese zvese zvinowedzeredzwa pasina matambudziko, uye kwete OS chete asi software yese yave iine nhau (browser, hofisi otomatiki, graphic editors, tsamba, multimedia, nezvimwewo) uye pasina chikonzero chekuti iwe uve unosimbisa chero chinhu pamberi pechidzitiro.
Uine Windows yaunobatidza, iyo yekuvandudza maitiro inotanga uye mushure meinopfuura 1 awa uye kumwe kutangazve, kana iwe wave nerombo rakanaka, wakwanisa kumutsiridza iyo OS chete, yeimwe rese software yatisingataure, kana iwe uchida iwe unofanirwa kuzviita nemaoko nekuwedzera kwekuwedzera kwenguva uye kugara pamberi pekombuta.
Nauj Rivera Parraga akadaro
Uye pano, muBolivia, ndinoiwana sei, ndiko kuti, ndinowana sei Linux. Ndiregerere nekuva supine ndisingazive nezve izvi. Richard Stallman akambouya kumusangano uyu, musangano wandakapinda nekuda kweyeye connoisseur kana uyo wandaida kunzwisisa. Kana ndichifanira kurasa tablet yangu yeNokia 2520, iyo nenzira yacho yakazara neMicrosoft, sezviri pachena, kunyangwe ivo vari 'kure', handisi muridzi wechigadzirwa ichi, nekuti vanoishandisa neremote control.
Pindura Nauj Rivera Párraga
Kana iri propaganda yeLinux, kana iri "yemahara", HAPANA DAMBUDZIKO, ndinosheedzera kuzwi ndinopfuudza iyo data uye ndinotobatsira nemirayiridzo yemahara. KUKWANIRA KUKWANYA KUKABA UYE KUSIMBISA DATA DZIMWE DZIMAI YOKUTENGESA NEGORE KUTI UVE NEMAHARA!
ZISO! Kana mukanditumira mhinduro, ini ndichazviongorora nenzira yangu. Izvo hazvisi kuzove izvo zvekuti organic Microsoft inoda kuunza nyonganiso kwandiri…. Ojito!
Chii chinonzi "distros"? Zvichida iko kurerutsa kwe 'vagoveri'? Wow ... Ndiri mukati pane izvi!
Kim kevin akadaro
Ini ndinokurudzira Linux, kunyanya Ubuntu sezvo zviri nyore kubata. Ndakaedza pachizvarwa chechipiri HP i5 laptop ndanga ndine dambudziko nekupisa uye ruzha rukuru munzvimbo inotonhorera yandakaita fomati katatu ini ndinayo kunyange Windows 3 Pro, ndichiita bvunzo dzinoverengeka ndachinja kuUbuntu Linux uye zvakanakisa ndakasiya zvese matambudziko ... ndaona kugadzikana uye nekukurumidza. Kunaka kune mhedzisiro asi kana iwe uchida kuchimbidza ndiko kuidzima ... ndinogara neLinux .... Windows 10/7 chimwe chinhu chatinomira kujaira ... uye kudzidza imwe OS
Pindura kuna Kim Kevin
Kune masevhisi akadai se (kutumira tsamba, proxy, WEB, firewall, IDS / IPS nevamwe ... ..), Linux, uye haisi nyaya yekuravira, kugadzikana kukuru uye kuita kwakawanda kunoitwa mukugadziriswa, zvinoda ruzivo muripo kubva kumunhu webasa uyo ari kugadziridzwa.
Linux inofanirwa kushanda zvakanyanya pane yekupedzisira mushandisi ruzivo, inova iyo Windows inotora nyika kubva mairi, uye kuendesa mashandiro pamwe nekugumisa kwakawanda uye usability, yakanangana nemushandisi wekupedzisira.
Ndiwo maonero angu, ahh uye kana mapurojekiti ari kubudirira, usatengesa iwo kumasangano akazvimirira, tsvaga imwe nzira yekuwana mari, zvakaitika kwandiri kuti kune mapurojekiti makuru akamiswa kutsigira yemahara vhezheni uye isa «matangi» Kune yakabhadharwa vhezheni ……
Pindura kune ertt
1- Kufananidza idambudziko, harisi rakakomba, harina dhata rekutsigira zvakataurwa uye zviri pakati nepakati kunyangwe mumaonero, ndizvo zvinoitika kana iwe uri 'anonyanyisa', kuti urasikirwe nemaonero .
2- Nezve Linux, zvinoita kwandiri seyakanaka OS mune zvakawanda zvakasiyana, nekuda kwekuda kuziva ndanga ndichiyedza akasiyana ma distros kune zvakasiyana zvinangwa, ini ndakatoisa Ubuntu mune yangu yekare iMac G5 PPC yandisina kunyanya kufarira, asi mune zvakajairika Linux Izvo zviri kure ne 'kuwira murudo' neruzhinji rwevanhu, uyo pakupedzisira, ndiani achatara kubudirira kana kwete ...
3- Ngatiregei kufunga zvimwe, ini ndine ruzivo rwakakwana kuti ndizvidzivirire mukumisikidza uye nekuwedzera kana kushomeka kwepamberi kweiyo OS uye haisi iyo panacea…. Mu 'kumutsidzira' makomputa ekare hapana chinhu chakareruka uye chinoshanda se windows xp uye izvo hazvidi kuti iyo curve yekudzidza iyo ndiyo imwe yezvipingamupinyi izvo Linux isingakwanise kukunda, iyo Lite shanduro dzemhando dzakasiyana dzeLinux dzakaedzwa, dziine mashoma kunze, vane zvikanganiso zvakakura kana zvakada kufanana nekushandisa Lite vhezheni yeWindows
4- Pane zvakawanda zvinotaurwa pamusoro pekumhanya ... zvakanaka, zvirokwazvo kune kuenzanisa kwakasimba kwazvo nehurongwa hwakaiswa pamidziyo ine yakafanana hunhu umo yakaenzana nzira yekuyera inoitwa nekuti kana izvi zvisizvo, kunzwa kwangu kuti vese w10 uye ubuntu inomhanya chaizvo, chaizvo zvakafanana kumhanya.
5- Kambani yangu inoshandisa Ubuntu, ndinoishandisa mazuva ese, inoshanda mushe here? ehe, hongu, kana iwe usingatambe zvakanyanya…. pamwe neW10…. makambani makuru haashandise Linux, haadaro, vanosarudza kubhadhara marezinesi ekushandisa 'yemahara' system uye pano hapana anobvunza kuti nei ... mayunivhesiti anoshandisa Linux? ... mayunivhesiti haatambe chinhu chakafanana nemakambani makuru, ngatiratidzei zvishoma zvishoma.
6- Ini ndinoda Linux? hongu, zvinoenderana nechinangwa chipi. Ini ndinoda Windows? W10 hongu, yakagadzirirwa zvakanaka uye kana ndikasarudza zvakavanzika sarudzo, izvo zvinogoneka. Mumwe ari nani here kana mumwe wacho? Handizivi…. pano ini ndinoona yakawanda nyanzvi / mainjiniya / nyanzvi iyo rimwe zuva ichavhura maziso angu (hahahaha)
7- ndine zvishandiso zvakasiyana uye nguva nenguva ndinoedza kuyedza uye kuyedza akasiyana ma distros ayo anondisimbisa kuti zvakanyatso kukosha kuisa nguva yangu mairi ... pakupedzisira, ndinogara ndichiguma ndichidzorera iyo michina kwayakatangira ... ndine urombo, ndine chokwadi chekuti vagadziri Linux rimwe zuva vachakwanisa kuwana iyo spark inoshandura zvese, asi pane izvo ini ndinofanira kutanga kufunga zvakasiyana, vanga vachiita chinhu chimwe chete kwemakore mazhinji uye vaine chinangwa chimwe chete, asi ivo usatombosvika ... kuchine chimwe chikanganiso chidiki, ini handizive, rega munhu wese afunge zvavanofunga ...
Anenge makore manomwe apfuura ini ndaishandisa kuhwina uye gore rega rega ndaifanira kumisazve iyo win system uye madhiri ayo ane mukurumbira uye rimwe zuva injinjini yakandiudza ubuntu kwandiri, kubvira ipapo ini ndinongo gadziridza kune imwechete iyo makore manomwe apfuura.
Unoishandisa ne KDE kana Gnome?
Ndakatanga kuisa Linux pakombuta yeshamwari nekuti pakavandudzwa Windows operating system handizive kuti takatumira shiti ipi asi haina kushanda uye takaedza zvese. Iwe waiziva kuti Linux yaive yemahara software asi iwe usati wamboishandisa. Ndakafadzwa ndikazopedzisira ndaiisa palaptop yangu. Ehezve, ini handina kunzwisisa chero chinhu pakutanga, ndaishandisa kushandisa Windows inokusiya iwe "zvese zviri mutray." Asi ini ndaifarira chaizvo kuita kwakawanda. Ini ndinoramba ndichitumira mabhatoni ekugara uchinhuwidza uchitenderedza asi ini ndinogara ndichigona kuzvigadzirisa. Nenzira, kana mumwe munhu akaverenga izvi uye achiziva kuisa kaviri skrini muLInux mint ini ndaizozvikoshesa. Ini ndakapunzikirwa nechikepe pa internet uye handina kuwana maitiro ekuzviita.
John Clos akadaro
Zuva reLinux (Ubuntu) rakashandurwa zvizere muchiSpanish (100%) Iyo bhalanzi inozadza zvakawanda mukuda kwayo.
Pindura Juan Clos
Mhoroi, ndaona kuenzanisa uye hazvina kurongeka nekuti pane mafunctions ayo anoti ubuntu haina uye mamwe inawo, semuenzaniso ungave ma backups.
Pindura kune Ultra
Zvikonzero zvekushandisa Linux kuvandudza
RIP - Kurasikirwa nekubatana kweCanonical